Ukutya kwe-Laxative: khawulezisa amathumbu akho ngokwendalo | Ukutya kukaNutri
Kukho ukutya okuninzi okuthambisa isisu kwiziqhamo nakwimifuno kwivenkile yakho. Kuba banokuba njalo kusebenza kakhulu ekuthinteleni okanye ekunyangeni ukuqhina, ngaphandle kwamathandabuzo kufanelekile ukuzazi ukuba ziyintoni na.
Izinto zokuthambisa zendalo baya kukunika amandla ekuhambeni kwakho kwamathumbu ngaxeshanye bakunike iivithamini kunye neeminerali ezifanelekileyo yeminye imisebenzi eyenzeka emzimbeni wakho.
1 Kutheni uthatha laxatives yendalo?
2 Ukungeniswa kunye nefuthe le-laxative
3 Ngaba ufumana ifayibha eyaneleyo?
4 Ukutya okune-Laxative kwindlela otya ngayo
5 Ngaba indlela ophila ngayo ingunobangela wokuqhinwa?
Kutheni uthatha laxatives yendalo?
Iyeza ze-laxative zibonelela ngesisombululo esikhawulezayo nesisebenzayo sokuqhinwa. Nangona kunjalo, akulungelanga ukuzisebenzisa rhoqo kuba umzimba unokusetyenziselwa ukungahambelani nokuhamba kwamathumbu ngokwawo. Isishwankathelo, amayeza e-laxative angenza ukuxhomekeka.
Olunye uhlobo kukutya okuthambisa isisu, okunceda ukuhambisa amathumbu kuhamba ngokukhawuleza. Kungcono ukuba ukukhutshwa kwenzeke ngendlela yendalo kwaye esempilweni ngoncedo lokutya. Zama ke laxatives yendalo kuqala.
Ukungeniswa kunye nefuthe le-laxative
Jonga eli nqaku: Ukususwa kwesisu. Ukuba uyazithanda izityalo kunye namayeza endalo, apho uya kufumana izithako ezininzi ezineempawu ze-laxative.
Ngaba ufumana ifayibha eyaneleyo?
Ukuba unengxaki yokuqunjelwa, lo ngumbuzo wokuqala onokuzibuza wona. Ukutya okunefibre-poor ziphakathi kwezona zinto zikhokelela ekuqunjweni.
Ixabiso leentsuku zonke lefayibha ngamagrem angama-25, nangona inani linokwahluka ngokuxhomekeke kwisini okanye kubudala. Icebo lokufumana okungaphezulu kukubheja kuzo zonke iinkozo kunye nezo mveliso zibonisa inani eliphezulu lefayibha kwiilebheli zabo. Nangona kunjalo, unokufumana ifayibha kukutya okuninzi okuzelwe emhlabeni. Ezi zilandelayo zezinye zefayibha ephezulu yemifuno. Khumbula ukufumana ifayibha yakho kukutya okuninzi kunokuba unokuzikhawulela kokukodwa:
Kufuneka kuqatshelwe ukuba izibonelelo zefayibha azikhawulelwanga ekwetyisweni. Kucingwa ukuba Le nto ikwadlala indima ephambili kulawulo lweswekile yegazi kunye namanqanaba e-cholesterol., kunye naxa kuncitshiswa umngcipheko wokuhlaselwa sisifo sentliziyo.
Ukutya okune-Laxative kwindlela otya ngayo
Abanye abantu banayo rhoqo kunabanye, kodwa ngokubanzi, akukho mntu ukhuselekileyo ekuqunjelweni. Ngele ndlela, mhlawumbi sele uzame ezinye zezi zinto zokutya zelaxative:
Ukudityaniswa kwamanzi ubukhulu becala (ukungathathi ngokwaneleyo i-H2O kunokwenza ukuqhina kube kubi), esi siqhamo sihlala sicetyiswa kwimeko yokuqhinwa ngenxa yempembelelo ye-laxative. Oku kungenxa yayo umxholo we-sorbitol kunye nefayibha, izinto eziphucula ukuhamba kwamathumbu. Nokuba intsha, iphelelwe ngamanzi emzimbeni okanye ikwimo yejam, iplamu ayisiyiyo enye yezona ndlela zaziwayo zokuqunjelwa ngamayeza ngengozi. Kusebenza kakhulu.
Nangona ibonakala ikakhulu njengelaxative yendalo, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba iplum ikwabizwa ngokuba zezinye iipropathi ezinomdla kakhulu. Uphando luyivelisa njenge i-antioxidant, i-antiseptic kunye nokuhlutha iziqhamo (kulungile ukulahleka kobunzima ukuba kusetyenziswe ngokumodareyitha).
Ikhiwane elimnandi lelinye lokutya elinempembelelo ethomalalisayo. Imfihlelo ilele kwindibaniselwano yefayibha kunye nemagniziyam inikeza. Ukongeza kuthintelo kunye nokulwa ukuqhina, amakhiwane nawo anika idosi elungileyo yamandla. Ngale ndlela, ukuyifaka ekutyeni kwakho kunokuba ngumbono olungileyo ngexesha lokufuna okukhulu ngokwasemzimbeni okanye ngokwasengqondweni. Ikwajongwa inomdla kubantu abane-cholesterol ephezulu okanye uxinzelelo lwegazi oluphezulu.
Umgangatho wokugcina uhambo oluhle lwamathumbu qiniseka ukuba uhlala unokutya kwesisu ekutyeni kwakho kunokuba ubhenele kubo kuphela xa kukho iingxaki.
Ngaba indlela ophila ngayo ingunobangela wokuqhinwa?
Ukutya okunxilisayo kusebenza kakhulu xa kudityaniswa nendlela yokuphila esempilweni. Olu tshintsho lulandelayo lunokukunceda uphume ngcono, nangaphandle kwesidingo sokuthatha naluphi na uhlobo lwe-laxative.
Ukuba uphantsi koxinzelelo oluninzi, ukutya kunokuhamba ngokuthe chu emathunjini akho. Kule meko, ubuchule bokuphucula baya kukunceda ukusombulula ingxaki. Kwelinye icala, Ukungabikho kwemisebenzi ebonakalayo kunefuthe elibi kuthutho lwamathumbu. Kulumkele ukuhlala phantsi kwaye wenze imithambo rhoqo ukuba awukabikho. Ukuthintela ukuqhina sisinye sezizathu ezininzi zokuqala uqeqesho.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba ezinye izifo zinokubangela ukuqhina, yiyo loo nto xa iqhubeka (ihlala iiveki ezininzi) okanye iza ikhatshwa zezinye iimpawu (kubandakanya ukwehla kobunzima), kuya kufuneka uye kugqirha ukuze ahlolwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukutya kukaNutri » Ukutya » Ukutya okunxilisayo